Ahoana no hahalalana raha misy lalao mandeha amin'ny PC 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ahoana no ahafantarako raha misy lalao mandeha amin'ny PC-ko? Afaka mahita mora foana ianao amin'ny alàlan'ny fitaovana manokana toy ny tranokala Azoko atao ve ny mitantana azy?. Raha tsy tianao ny scann'ny solo-sainanao dia afaka mandeha amin'ny fomba nentim-paharazana ianao amin'ny fampitahàna amin'ny fomba manokana ny famaritana.
Jereo eto ambany ny fomba hahitana raha malemy ny PC anao na handeha tsara amin'ny fampandehanana ny lalao.
Miaraka amin'ny fanampian'ny tranonkala manokana
Misy tranokala vitsivitsy izay manam-pahaizana manokana amin'ny fampitahana ny famaritana ny solo-sainao sy ny takiana farafahakeliny takian'ireo lalao lehibe eny an-tsena. NA Azoko atao ve ny mitantana azy? dia iray amin'ireo malaza indrindra, afaka manamarina ny fikirakirana ny milina anao ho azy.
1. Sokafy ny navigateur safidinao ary mandehana any amin'ny Can I run it?
2. Ao amin'ny pejy voalohany, dia hahita boaty fikarohana ianao amin'izay tokony hanoratanao ny anaran'ny lalao, toy ny, The Sims 4. Raha misy ao amin'ny katalaogin'ny pejy ny lalao dia hiseho ao amin'ilay lisitra izy io. Kitiho ny anarana izay misoroka ny lesoka amin'ny fikarohana;
3. Avy eo tsindrio ilay bokotra Azonao atao ny mitantana azy hanao ny fikarohana;
4. Amin'ny pejy manaraka dia haseho ny takiana farafahakeliny sy tsara indrindra hitantanana ny lalao. Mba hamakafakana ny PC-nao dia ilaina ny misintona rakitra iray ahafahan'ny tranonkala manamarina ny masontsivana ara-teknikan'ny masininao. Mba hanaovana izany dia kitiho ny bokotra Azonao atao ny mitantana azy mampidina ny rindranasa amin'ny tranokala;
5. Sokafy ny rakitra azo tanterahina ary tazomy hisokatra hatrany ny pejin-tranonkala. Hanomboka hamakafaka ho azy ny programa ny programa;
Miankina amin'ny browser, ny programa dia haseho eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery rehefa vita ny fisintomana. Ho hita ao amin'ny lisitry ny fisintomana ihany koa izy io mpitety ary mazava ho azy ao amin'ny lahatahiry itodiana.
6. Ny fotoana diagnostika dia mety miovaova segondra vitsy ka hatramin'ny minitra vitsy ary ny valiny dia haseho eo amin'ny pejin-tranonkala nosokafanao. Milaza aminao izany raha manana ny takiana ilaina farafahakeliny ny masininao ary koa ireo izay atolotra mba hiasa ny lalao nefa tsy misy olana.
Tranonkala hafa hahitana raha mandeha amin'ny PC ilay lalao
PCGameBenchmark dia mamela anao hiditra amin'ny tanana ny fikirana PC-nao na misintona rindrambaiko izay manadihady ho azy ny famaritana masinina. Avy eo mitady fotsiny ny anaran'ny lalao.
Na dia manam-pahaizana manokana amin'ny lohateny EA aza izy dia manana safidy avy amin'ny developer hafa ny Game Debate. Toy ny fitaovana teo aloha, mamela anao hiditra amin'ny tanana ny angona na hisintona fampiharana izay manangona vaovao momba ny PC eo noho eo. Noho izany, mitady fotsiny ny lalao irina.
Fomba iray hafa hahafantarana raha hiasa ny lalao na tsia amin'ny PC-nao dia ny fampitahana amin'ny tanana ny famaritana ara-teknikan'ny PC amin'ireo fepetra takiana faran'izay kely takiana amin'ny lalao. Ny vahaolana dia mety maharitra ela kokoa noho ny amin'ny alàlan'ny tranokala, saingy tsotra ihany koa ny fanaovana azy.
Ahoana no hahitana ny mombamomba ny PC
Afaka mahita ireo pitsopitsony ara-teknikan'ny solo-sainao amin'ny fomba maro ianao. Ny tsotra indrindra amin'izy ireo dia amin'ny fanoratana ny teny Msinfo32.exe ao amin'ny boaty fikarohana Windows. Miankina amin'ny kinovan'ny rafitra, ny fitaovam-pikarohana dia hita ao amin'ny biraovana na amin'ny menio Start (amin'ny fipihana eo amin'ny kisary Windows).
Ao amin'ny valin'ny fikarohana, kitiho Msinfo32.exe manokatra. Raha tsy vitanao dia mety mila izany ianao Mihazakazaha ho mpitantana. Raha hijery ny safidy, tsindrio fotsiny ny valiny.
Ao amin'ny varavarankely Fampahalalana momba ny rafitra, eo amin'ny bara ilany havia, kitiho Famintinana ny rafitra. Azonao atao ny mijery ny mombamomba ny rafitra miasa (1), processeur (2) mi fahatsiarovana (3).
Raha hanamarina ny fitehirizana dia kitiho fitehirizana ary avy eo ao vondrona.
Na eo aza izany, raha te hahalala ny maodelin'ny kara-panoronao dia kitiho singa ary avy eo ao hatsiaka. Raha manana karatra natokana sy karatra namboarina ny solosainao, dia haseho ireo data amin'ny karazany roa.
Ny mpitari-dalana anay Jereo ny fikirana PC manazava ny fomba hijerena amin'ny antsipiriany ireo andinin-tsoratra amin'ny kinova samihafa amin'ny Windows. Anontanio raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'io lohahevitra io ianao.
Raha te hanafaingana ny fizotrany ianao dia azonao atao ny mampiasa ilay programa Speccyavy amin'i CCleaner. Ny kinova maimaim-poana dia afaka manamarina ny fitaovana ary manome ny fampahalalana ilaina hahitana raha mifanaraka amin'ny masininao ny lalao.
Sintomy fotsiny, apetraho ary kitiho ny bokotra Mihazakazaha miteny. Tao anatin'ny segondra vitsy dia naseho ny angona momba ilay fitaovana, toy ny aseho etsy ambany. Ho fanampin'izay, notaterina ihany koa ny mari-pana amin'ny karatra CPU sy horonan-tsary.
Fampitahana amin'ireo fepetra takiana amin'ny lalao farafaharatsiny
Raha vantany vao manana ny famaritana ara-teknikan'ny solosainao ianao dia zahao fotsiny ny takiana farafahakeliny ilaina mba hihazakazahan'ny lalao eo amin'ilay milina. Ity fampahalalana ity dia mazàna hita ao amin'ny tranokalan'ny mpamorona sy amin'ireo sehatra mampiantrano azy ireo.
Amin'ny Steam, ohatra, ny fampahalalana dia azo jerena ao amin'ilay fizarana Momba ity lalao ity. En Fepetra momba ny rafitra, no farafahakeliny sy takiana ilaina hampiasana ny lalao amin'ny PC.
Amin'ny tranga Fifa 21 dia aseho izao valiny manaraka izao:
Ny safidy iray hafa dia ny fampiasana tranonkala mifanaraka amin'ny fepetra takiana faran'izay kely indrindra amin'ny lalao lehibe amin'ny toerana iray. Mitadiava anarana fotsiny mba hahitanao izay tadiavinao.
Azoko atao ve ny mihazakazaka azy, PCGameBenchmark ary Game Debate no manolotra ity angona ity. Ankoatr'izy ireo dia misy ihany koa ny takian'ny System System Requirements.
Fepetra ambany indrindra x Fepetra takiana
Ny takiana farafahakeliny dia manondro ny fitaovanao afaka mihazakazaka lalao. Na izany aza, hanao tsara kokoa izy, toy ny sary milamina sy tsara kokoa, raha manana ny masamihafa voatondro ny PC.
Ny rafitra fiasa sy ny habaka kapila takiana dia tsy miovaova amin'ny fepetra takiana farafahakeliny sy atolotra. Ny RAM, ny processeur ary ny carte de graphique no singa afaka miovaova be amin'ny iray hafa.
Ireo emulator Android tsara indrindra sy maivana hilalao amin'ny PC malemy
Safidy fandraketana sary ho an'ny PC malemy
Ahoana ny fampifandraisana ny findainao amin'ny fahitalavitra tsy marani-tsaina amin'ny fomba 5 samihafa
Misy varavarankely misy rindrina, mifatotra na mifatotra ao amin'ny Windows 10